Organic fatịlaịza | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Organic fatịlaịza
Atụmatụ kabeji fatịlaịza karịa na-eri nri na kabeeji na-etolite isi nke kabeeji
Cabbage bụ ihe a na-ahụkarị, ma ọ bụ ihe ọkụkụ na-achọsi ike. Iji hụ na e guzobere nnukwu ikpo isi, ọ dị mkpa iji nlezianya mee ka ị na-emepụta fertilizing ma na-eme nri na osisi. Iwu ndị isi maka inye nri ọcha.
Nitrogen bụ ihe dị mkpa dị mkpa maka mmepe osisi. N'ụzọ dị mwute, ọ na-ekpofu ya mgbe nile site na ala n'ime ikuku, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka ndị na-elekọta ubi na-akwụghachi ụgwọ mgbe nile maka nitrogen na azụ azụ maka ezigbo owuwe ihe ubi. Ụdị nri dịka guano, nri, compost nwere ike ịghọ isi iyi nke nitrogen, mana nnweta ha chọrọ ụgwọ ihe onwunwe.
Ịhọrọ fatịlaịza mmiri maka ubi
N'oge opupu ihe ubi, mgbe agwa na-akpọte, ndị bi n'oge okpomọkụ na-arụ ọrụ karị, n'ihi na n'ihi na ha bụ oge na-ekpo ọkụ. Iji nweta nnukwu owuwe ihe ubi na ọdịda, ịkwesịrị ịkwadebe ala maka ụra na mmalite oge opupu ihe ubi, gụnyere ịka nri ziri ezi na ịhụ ihe ndị kwesịrị ekwesị. Ọ dị mkpa iburu n'uche mkpa nke ubi a kụrụ n'ubi a ga-akụ na saịtị ahụ.
Esi mee ka elixir maka osisi, ihe ọkụkụ na-akpali akpali
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi na-eche echiche banyere ọrụ ugbo. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụbụrụ nke oge a, ọ dịghị ihe ọkụkụ ga-eweta ezigbo owuwe ihe ubi ma ọ bụrụ na ọ naghị eme ka ala na fertilizing osisi dị ala. Ma, e nwere ụzọ - ndị a bụ elixirs oriri na-edozi ahụ na ihe na-akpali akpali nke nwere ike iji aka gị mee ihe ndị dị na ya.
Ịgba ogige ma ọ bụ ogige akwukwo nri anaghị adị mfe dị ka o yiri ka ọ na-ele ya anya. Maka mkpụrụ dị elu, ọ dị mkpa ịdebe usoro nlekọta maka ihe ọkụkụ: weeding, watering, feeding. Ka anyi kwue banyere nri, dika akwukwo nri ahihia ogwu, n'isiokwu a. Kedu ihe ahịhịa fatịlaịza fatịlaịza bụ ahịhịa ọ bụla na-etobeghị maka omenala, a na-ahapụ ha ka ha too, mgbe ahụ mowed ma jiri nlekọta siri ike na-elekọta ubi ubi na ihe ubi.